Si shaqo looga helo Iswiiidhan waxaa badanaa shardi looga dhigaa inuu qofka leeyahay ugu yaraan waxbarasho heer dugsi sare ah. Haddii aadan heysan shahaado dugsi sare ama mid dugsi dhexe waxaa jira jaanisyo aad ku akhrisan kartid.
Boggaan waxaad ka akhrisan kartaa waxbarashooyinka kala duwan, bogga internetka ee utbildningsinfo.se waxaad ka dalban waxbarashada aad xiiseyneysid. Bogga internetka ee Omsvenskaskolan.se waxaad ka akhrisan kartaa sida uu u shaqeeyo qaabka waxbarasho ee iskoollada wadanka Iswiidhan. Boggana waxaa lagu fasiray luqado kala duwan
Inta badan waxbarashooyinka Iswiidhan waa lacag la'aan waxaana lagu maalgaliyaa canshurta lagu qaado dadka Iswiidhan. Maadaama uu qofku badanaa uusan heysan wax dakhli ah marka uu ardayga yahay waxaa lacag aad buugaagta waxbarashada ku gadato ka dalban kartaa hey'adda kaalmada waxbarashada ee CSN. kaalmada waxbarasho waxaad dalban kartaa markaad bilaabeysid waxbarashooyinka kala duwan.
Jiheynta xaga waxbarashada
Haddii uu shaki kaaga jiro waxa aad rabtid inaad baratid waxaa caawimaad ka heli kartaa jiheeeyaha xaga waxbarashada iyo xirfadaha ee degmadada. La xiriir degmadaada ama booqo studera.nu si aad faafaahin dheeraada u heshid.
Haddii aadan soo dhigan dugsi hoose dhexe ama dugsisare waxaa xaq u leedahay waxbarashada dadka waaweyn. Waxbarashada laga barto iskoolka dadka waaweyn waxeey kusiineysaa aqoonta asaasiga ee aad ugu sii gudbi karto heer jaamacadeed. Haddii aad dhigatid iskoolka dadka waaweyn waa raadsan kartaa kaalmada dhaqaale oo eey bixiso hey'adda kaalmeynta waxbarasho.
Degmadaada kala xiriir wixii faafaahin ah ama halkan ka akhriso warbixin dheeraad ah.
Dugsiga waxbarasho ee dadka waaweyn
Dugsiga waxbarasho ee dadka waaweyn waxaa loogu tala galay dadka da'dooduy eey ka weyntahay 18 sano, waxaadna ka akhrisan kartaa waxbarasho heer dugsi hoose dhexe iyo sare.
Waxaadna iskoolka ka akhrisan kartaa koorsooyin kala duwan:
Koorsooyin guud aad ka akhrisan karto dugsiga sare – ama mararka qaar aad ka dhigan karto dugsiga hoose dhexe.
Koorsooyin gaar ah oo loogu tala galay ku takhasusidda maaddo ama xirfad gaar ah.
Waxbarashada dugsiga dadka waaweyn waxeey ku siineysaa waxbarasho asaasi u ah inaad billaabi kartid jaamacad. . Haddii aad dhgatid iskoolka dadka waaweyn waa raadsan kartaa kaalmada dhaqaale oo eey bixiso hey'adda kaalmeynta waxbarasho. Dugsiyada qaarkood waxeey hayaan oo eey siin karaan goobo la seexdo inta lagu guda jiro muddada waxbarashada.
Barnaamijyada waxbarasho iyo koorsooyinka aad ka akhrisan kartid dugsiyada waxbarasho ee dadka waaweyn waxaad heleysaa halkaan.
Machadka farsamada waa qaab waxbarasho oo ku saabsan aqoontada farsamada gacanta oo heer dugsi sare ah. Ujeedadu laga leeyahay waxbarashada waa in la daboolaa baahida shaqooyinka farsamada uu u qabo suuqa weeeyna ka helaan wada shaqeynta fiican ee u dhaxeeysa iyaga iyo shirkadaha shaqada.
Shaqooyinka badankood waa kuwo ku saleysan cilmi buugeed iyo mid farsamo gacan labadaba. Taasna waxeey keeneysaa inaad si fiican u barato xirfaddaada. Waxaa kaloo xiriir la yeelaneysaa suuqa shaqooyinka oo hadhoow kuu fududeeynaayo shaqo raadiska.
Barnaamijyada waxbarasho qaarkood waxeey kuu hayaan caawimaad xaga luqadda iswoodhishka ah si eey caawimaad dheeraada kuu siiyaan haddii luqadda iswiidhishka eeysan aheyn luqadaada koowaad. Haddii aad rabtid inaad ogaaatid warbixin dheeraad ah ka kahriso halkaan ama la xiriir laanta qaabilsan machadyada farsamada.
Si aad u akhrisatid waxbarasho heer machad farsamo waxaad u baahan tahay inaad heysatid shahaado dugsi sare ah ama wax u qalma. Haddii aadna buuxin karin shuruudaha lagaaga baahan yahay waxaaa mararka qaar dhacda in iskoollada qaar eey cudur daar u sameeyaan qofka eey u arkaan inuu ka bixi karo waxbarashada kana shaqeyn kara xirfadda farsamo ee uu bartay. Markaaso kale waxaa toos loogu tagaa iskoolka laga barto waxbarashada aad xiiseyneysid weeydiina haddii eey jiraan fursadaha aan soo sheegnay.
Sida caadiga ah waad dalban kartaa kaalmada dhaqaale ee csn, marka aad dhiganeysid waxbarasho heer machad farsamo ah, marar dhif ah mooyee.
Waxbarasho heer jaamacadeed- iyo heer machad jaamacadeed.
Iswiidhan waxeey leedahay jaamacado iyo machadyo jaamacadeed. Farqiga u dhaxeeyo waa in jaamacadda qasab tahay ineey lahaato qeeybo lagu barto daraasadaha sare ee baaritaanka ah, laakiin machad jaamacadeedka qasab maahan inuu heysto barnaamijyo waxbarasho oo heer baaritaanno ah. Barnaamijyada waxbarasho ee machad jaamacadeedka iyo kuwa jaamacadda waa isku mid oo isku dhibco ayaa lagu helaa.
Jaamacadda iyo machad jaamacadeedka waxaa laga baran karaa barnaamijyo waxbarasho oo buuxa ama koorsooyin gaar loo akhristo. Si aad shahaado uga qaadatid tusaale ahaan dhakhtar, qofka bartay maamulka arimaha bulshada, qareen, ama injineer waa inaad raacdaa manhajka waxbarasho ee u degan barnaamijkaas. Haddii aad akhrisaneysid koorsoyin gaar kuu ah adiga ayaa dooranaya koorsooyinka aad rabtid iyo sida aad rabtid inaad isugu xijisid. Haddii aad rabtid inaad ogaatid warbixin dheeraada oo ku saabsan koorsooyinka iyo barnaamijyada waxbarasho ee laga barto jaamacada Iswiidhan waxaad booqan kartaa studera.nu oo ku fasiran luqado badan.
Markaad dhiganeysid jaamacad ama machad jaamacadeed waxaad dalban kartaa kaalmada dhaqaale ee csn ka.
Si aad u dalbato waxbarasho heer jaamacadeed waxaa lagaaga baahan yahay inaad buuxiso shuruudaha leesaga bahan yahay. Shuruudahaan waxaadbuuxineysaa haddii ad heysatid shahaado dugsi sare oo eey ku jiraan maadooyinka iswiidhish, ingiriis iyo xisaab. Haddii aad heysatid shahaado dugsi sare oo wadan kale ah waxaa dalbataa in qiimeyn lagu sameeyo si loo arko inaad buuxineysid shuruudaha leeskaga baahan yahay iyo in kale. Qiimeyntaas waxeey kaloo tusin kartaa waxa aad u baahan tahay inaad soo buuxisid si aad u dhigatid waxbarasho heer sare ah. Qiimeynta waxaa sameeya guddiga jaamacada iyo waxbarashooyinka sare.
Waxbarashada dhameystirka lagu sameeyo
Waxbarashada dhameystirka lagu sameeyo waa mid khuseeysa xirfad gaar ah waxaana loo qorsheeyaa qof kali ah. Ujeedana waa inaad dhameystir ku sameeysaa khibrad xirfadeedkaadii hore si aad u buuxisid shuruudaha leeskaga baahan yahay ee ganacsiga suuqyada Iswiidhan.
Waxbarashada dhameystirka lagu sameeyo waxeey noqon kartaa mid lagu daboolayo baahi markaas suuqa ka jirto waxaadna ka akhrisan kartaa goobo xiriir la leh xafiiska shaqada. Si aad u akhrisatid waxaa shardi ah inaad ka diiwaan gashan tahay xafiiska shaqada. Wixii faafaahin dheeraad ah kala xiriir xafiiska shaqada ee degmadaada.